CCW oo socdaal shaqo ku tagay magaalada Doolow | KEYDMEDIA ENGLISH
DOOLOW, Soomaaliya - Ergeyga gaarka ah ee Madaxweynaha JFS u qaabilsan Arrimaha Bani-aadannimada iyo Gurmadka Abaaraha, Md. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa safar shaqo maanta ku tagay magaalada Doolow ee gobolka Gedo.
Ergeyga waxaa safarka ku wehliya, ku xigeenka Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay Adam Abdelmoula oo sidoo kale ah Xiriiriyaha iyo Isuduwaha Hawlaha Bani'aadamnimada ee Hawlgalka Kaalmeynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM).
Xubno ka socda Xafiiska Qaramada Midoobay ee Isku diba-ridka Arrimaha Bini'aadannimo [OCHA], ayaa sidoo kale ergayga ku wehliyay socdaalka shaqo, kaasoo ku qotoma u-kuur-galidda xaaladdaha abaaraha iyo nolosha danyarta abaaruhu saameeyeen.
Doolow waa magaalo marti-galinaysa kumannaan qoys oo abaaruhu ceyrteeyeen, kadib afar xilli roobaad oo baaqday. Haqab-beelka cuntada iyo nafaqo-xumada ayaa la filayaa inay ka sii darto, haddii gargaarka bini'aadannimo aan kor loo qaadin lana joogteyn.